Malunga ... Ubhulogi obukhulu kakhulu
Sawubona kwaye wamkele kwiwebhusayithi yethu ebalulekileyo yezobucayi! Akuyindawo nje apho unokufumana khona amatye okanye uchithe ixesha kwaye ungabuyi kwakhona, akukho-indawo apho abantu banelisa khona izifiso zabo zesini. Indawo apho abantu bafumana khona abantu abanomdla, indawo apho zonke zakho ezinzulu, iingcamango eziphikisayo ziba yinyani.
Iqoqo lethu elimangalisa le-pornography liyaqhubeka likhula kwaye liguquke, ngalunye suku silayisha enye into entsha, inomdla kwaye iphikisiwe. Awuyi kufumana nayiphi na into enokuthi ithathwa njengesiqhwala, idama okanye i-vanilla esicacileyo apha. Asiyi kuba nayiphi na enye indlela. Sifuna ukuba uhlale unyanisekile kwiminqweno yakho emininzi, sibahlonele ngokwenene, kuba sinendlela efanayo. Siyathemba ukuba, ukuthanda kwethu zonke izinto ezidakileyo kuya kwenza ukuba amava akho okubuka ama-porn amnandi kakhulu. Kwaye ngoku lixesha elifanelekileyo lokuthetha ngawo onke amacandelo ewebhusayithi yakho eyintandokazi.
Okokuqala, siye sabalalisa iividiyo. Akuyiyo indebe yomntu wonke weeyi, kodwa amanani ethu abonisa ukuba enye yezona zinto zininzi (ukuba azinjalo) ezithandwa kakhulu kwiwebhsayithi yethu. Emva koko sine-Enemas edlala i-enema idlala iividiyo kunye nazo zonke ezinye iintlobo zeemidlalo ezenzelwa ukuziphatha ngokwesini. Ukudlulela phambili, sibuye siphathe iividiyo kunye nezicatshulwa ezinxulumene nokuFakela / ukuFakela kweNdlunkulu kunye neTekisi ezinkulu / amaFucking Machines. Yiloo nto abantu abanandiphayo ekujongeni intombazana eyayihlala yodwa, ityhutywe kwisiqingatha. Ngoko ke, mfutshane, ukuba ufuna ukufumana i-vertigo ngokujonga umgodi womntu othile, ezi ziqendu zibini kuwe.
BDSM, kunjalo. Akukho nto ifana nokulawula okuphosakeleyo kunye nokungeniswa kwamnandi. Sinegatya eliqhelekileyo le-BDSM ngezibetho, iintambo kunye nazo zonke izinto ezenza umdlalo u-Rihanna ngokwamkelwa kwakhe. Emva koko sineCandelo loLawulo loBesifazane ukuwanelisa zonke izibongozo zakho ezinxulumene nesetyhini, lungele ukubona ubuso, unqulo lweenyawo, ikhukhamba kunye nokunye. Icandelo lolawulo lobuLebhi okanye iLezdom lizaliswe ngamavidiyo amahle aqukethe amabini (okanye ngaphezulu) amantombazana adlala kwimidlalo yeBDSM. Ubukhosi boMntu okanye i-maledom ngokumalunga nabasetyhini abathanda ukuba bubuhlungu, phantse kunzima kakhulu kwaye bafana abazimisele ukungazintli, abanentloni kunye nabanobudlova.
Ukuba ufuna into engaphezulu, sikufumene. Kuthiwani ngamanye amavidiyo ahlambayo? Amantombazana / abafana belahlekelwa ukulawula kunye nokuqhafaza kwikhamera, ukuhlanza omnye komnye okanye ukuxutywa nge-bhile ngexesha leeseshoni zabo zokwenza uthando? Izandi ezihle kakhulu, akunjalo? Siphinde sibe necandelo lokungena kwiRape Fantasy kwaye, ngokungaqinisekanga, iinombolo zethu zibonisa ukuba le niche iyakuthandwa ngabavakashi bethu beendwendwe. Ukuba ufuna umtsalane ongapheliyo wevidiyo eziphosa, sinakho. Ezinye iindidi ziquka iBondage kunye ne-Fetish, i-PVC kunye neLatex kunye ne-Fetish ehlukeneyo.
Kanye xa ufuna ukuba abafazi bakho bakuthushe, sinalo lonke iqela elizinikezele kwiimfesane. Kuphela kubantwana abancinci be-t-bantshi kunye nemizimba emangalisayo kunye neentsimbi zomfazi. Uyakuthanda. Kukho necandelo elizinikezelwe kuphela kubhinqa abanezinwele. Akukona nje iiprosies ezinobuhlungu, mhlawumbi - ezi ziintsana zinobuhlungu obukhulu kakhulu obuye wazibona kwaye asinakuthetha nabo ngemingxuma yabo embi.
Ngento ethile eninzi, sinesiqendu esinikezelwe kwi-Foot Fetish. Owona mntwana ongobukhulu kakhulu onokuyicinga, ngoko kungabikho mntwana, sinokuzifumana sisiqendu seTits kwi-rate. Icandelo leeFarts likuvumela ukuba ubukele iividiyo ezibandakanya, yintoni enye, amantombazana kunye nabafana abahamba phambili. Ividiyo ze-Squirting zinikezelwe kwi-orgasm ekhuselayo, ekhuselayo. Spit amavidiyo uza kwenza umlomo wakho amanzi, ugobe ngokugqithiseleyo kwi-keyboard. Kukho na macandelo anikezelweyo kwi-Medical Hardcore Fetish, i-Pumping, i-Teens (i-18 +) kunye ne-Asshole Corner yangoku. Sisavulelekile kwiingcebiso, ngubani ongcono - i-Asshole Corner, i-Asshole Asylum okanye i-Asshole Alley? I-Alliteration iyakhangisa, yamkele.
Kwaye i-ace yethu emgodini, oko kuthetha, yiCandelo eliPhezulu kakhulu. Kubi kakhulu kunalo igama elifanelekileyo. Ukubiza into into yayingenangqondo, kuba akukho ndlela yokubonisa ukuba udidi olufanayo kumxholo. Yonke into yasendle, enye yeyona nto inqabileyo, ephosakeleyo, enobudlova obonakele. Ezinye zezo zinto zizodwa, zivela kwiiqoqo ezizimeleyo, ezinye zazo zithunyelwe ngabasebenzisi bethu abakhohlisayo (kodwa abesabekayo), kwaye ezinye zazo zifunyenwe kwi-drive yomama wakho. Ungesabi ukuyivula, ayikho ibhokisi likaLemarchand. Siyazi ukuba ufuna.
Ukwenza eli gama elide lifutshane, sifuna nje ukuba ujabule kwiwebhusayithi yethu. Kukhululekile kwaye ngoko, uphazamiseka kakhulu. Udinga i-pornography ephosakeleyo njengaye kwaye siyinika yona. Yonke imihla, iiveki kunye neveki ngaphandle, unyaka wonke. Ufumana ukuhlaziywa kwamahhala, iitoni zeefostile ezigqithiseleyo, kwakhona, mahhala. Musa ukuphosa malunga nalo: sifuna ukuva impendulo yakho, sifuna ukuba usixelele iiphi ividiyo ozithandayo, isihogo, usenokusixelela malunga nendlela ohamba ngayo ngosuku - asikhathalele, senzele wena kwaye ufuna ukuva kuwe.
Ubhulogi obukhulu kakhulu > malunga